Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP ... izany rehetra izany! Mora noho ny nieritreretanao azy! | Martech Zone
Talata, Oktobra 3, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tsara… ity dia fidirana bilaogy SUPER BEGINNER ho an'ny sakaizan'ny zanako lahy rehetra any izay manontany tena hoe inona no ataoko tontolo andro.
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP, XSLT, HTML, HTTP… bla, blah, blah.
Inona no dikan'izany rehetra izany? Tsotra sy tsotra? Midika izany fa afaka miresaka amin'ny rafitro ny rafitrao. Manana fiteny iraisana izahay… miresaka amin'ny alàlan'ny Hypertext Protocol (ny feonay) ary XML (na akaiky azy… no fiteninay). Tsara, inona no dikan'izany? Ie, midika izany fa lazaiko aminao aloha izay lazaiko ary avy eo miresaka momba izany aho, ary rehefa vita ny firesahako azy dia lazaiko aminao fa efa vita aho.
Ny anarako no lazaiko.
Vita ny milaza ny anarako.
Ao amin'ny XML dia:
Ny zavatra lehibe momba ny XML dia ny ahafahako mandefa renirano sy loharano fampahalalana aminao. Azoko atao koa ny mandefa anao firaketana marobe amin'ny fotoana iray:
Maniraka anao aho.
Mandefa anarana voalohany aminao aho.
Vita ny fandefasako anarana voalohany ho anao.
Vita ny fandefasako olona anao.
Ao amin'ny XML:
> / Olona>
Ka… raha mahay miteny ny fiteninao aho… dia afaka mifampiresaka isika, sa tsy izany? Marina tokoa! Toy izany no fiasan'ireo teknolojia rehetra ireo. Azonao atao ny miditra amin'ny Wikipedia ary mijery azy rehetra, saingy tsotra sy tsotra izany. Raha ny tena izy dia ny fomba famakianao izao fidirana bilaogy izao izao. Napetrakao ao anaty tranokalanao ny adiresiko ary hoy ny browser anao… hey, Douglaskarr.com, ianao any? Hoy aho hoe! Ity ny HTML-ko. Ary fantatrao hoe taiza no niantombohan'ny pejiko sy nifaranana mifototra amin'ireo marika ao amin'ny HTML (Fiteniko Markup HyperText).
Raha mandahatra azy aho… tsy maninona izay rafitra misy anao na eto aho… afaka mifampiresaka tsy misy olana isika. Afaka mampiasa PHP aho ary miresaka amin'ny mpizara iray mihazakazaka Java, .NET, Perl, ASP… na inona na inona. Tsara, ha? Azo antoka fa izany, azafady!
Raha mamorona programa tsara aho ary tianao hiresaka amiko ny rafitrao, dia hanangana API aho, na Application Programming Interface. Io dia ahafahanao mangataka fampahalalana amiko… ary averiko aminao ao amin'ny XML izany. Hentitra ve ny feony? Tsy… izany no fiasan'ny Google! Zahao ny adiresy aorian'ny tsindrio alefanao:
Hoy aho… hoy Google, te-hanontany momba ny rafitrao aho (q) Douglas Karr. Handeha ianao… q = Douglas + Karr! Ary avy eo mamaly amin'ny alàlan'ny HTML marobe i Google mba hasehon'ilay mpitety tranoko ahy. Hey, izaho no # 1! Woohooo.
RSS dia tena mitovy. Ny bilaogiko dia manana fahana RSS izay manaisotra ny sary ivelany rehetra ary mamolavola endrika ary manipy ny atiny ho hitanao fotsiny. RSS dia midika hoe Syndication Tena Tsotra… Geek miresaka zavatra XMLish bebe kokoa. Afaka mijery ny bilaogy amin'ny 'Reader' aho izao…
Eto no mahafinaritra ny fampidirana. Afaka mandefa atiny, angona, fisehoan-javatra, fampahalalana, resaka… saika ny zavatra rehetra amin'ny XML. Ny fiteny maoderina rehetra any dia afaka mampiasa XML (teny fancy dia… mandany XML) ary amin'ny alàlan'ny 'fanaparitahana' ny hafatra no anaovany azy. Midika fotsiny izany fa ny fisarahana mba hahafantarany azy. Ny SOAP dia fomba iray hafa handefasana XML hatrany hatrany.
Aza mino ahy? Ity ny pejy miresaka aminy: http://www.payraisecalculator.com/getPayraise.php. Jereo fa tsy misy soatoavina tena izy… satria tsy nandefa na inona na inona aho. Fa azonao ilay hevitra.
Ka inona no dikan'izany rehetra izany? Eny, handray ny harato ny RIA ary hanamora kokoa azy. Mikiakiaka ireo mpanohitra fa tsy maintsy manana programa toa an'i Microsoft Word sy Excel foana isika. Marina ve? Ahoana ny amin'i Google Ara-dalàna ary spreadsheets? Eo akaikin'ny zoron'olon-tsotra ry zalahy.
Ny mahatsikaiky an'io dia hoe 20 taona lasa izay no firoboroboan'ilay Solosaina Manokana izay tsy nila nikirakirantsika tamin'ny rafitra 'mainframe' sasany. Eny… maminavina inona ?! Miverina amin'ny mainframe izahay… misy andiany iray monja amin'izy ireo ao amin'ny Internet.
Fiarovana ny lozisialy sy ny mpanjifa amin'ny mpisandoka?